Sida loo nadiifiyo saqafka fidsan si aad ugu ekaato mid cusub
Waa maxay saqafka fidsan
Saqafka fidsan waxay ka samaysan yihiin filim PVC iyo dhar. Kuwa ugu horreeya waa kuwo aan fasiraad lahayn, waxaa lagu dhaqi karaa dhibaato la'aan. Kuwa labaad way ka yara adag yihiin in la nadiifiyo, laakiin wali waa xaqiiqo. Waa kan sida loo maareeyo caqabadan.
Sida loo nadiifiyo saqafka fidsan ee PVC
Maxaa loo baahan yahay
Saabuunta weelka (ama biyo saabuun ah, ama saabuun gaar ah oo saqafka lagu nadiifiyo);
jaranjarada ama miis adag;
saqafyada dhalaalaya, dhalada nadiifiyaha ah ama 50 g oo vodka ah.
Maxaa nala gudboon
Isku qas qaado qaado oo saabuun ah iyo 3 litir oo biyo ah. Haddii aad isticmaasho nadiifiyaha saqafka gaarka ah, raac tilmaamaha xirmada.
Qaabka: LOVISOVET / YouTube
Maro ku qooy xalka oo ka marooji. Marka hore isku day saabuun kasta oo ku yaal qaybta dhinaca ee saqafka: mari, u daa 10 daqiiqo oo biyo raaci. Haddii aysan jirin calaamado iyo xariijimo haray, markaa waxaad bilaabi kartaa inaad dhaqdo dhammaan dusha sare.
Istaag jaranjarada ama miiska oo si tartiib ah u xaaq xaajinta saqafka sare ee gidaarka. Ku wad xariiq toosan, dhaqdhaqaaqyada wareegtada ah ayaa laga yaabaa inay ka tagaan meelo xargo ah. Ha ku cadaadin xaaqin: aad bay u fududahay in la waxyeeleeyo filimka saqafka ee dhaqdhaqaaqa taxadar la'aanta ah.
Si tartiib ah ugu dhaq saqafka oo dhan si toos ah, raaci marada mar mar.
Haddii sharacaagu matte yahay, tani waa dhamaadka shaqadu. Hadday dhalaalayso, markaas waxaa jirta hal tallaabo oo kale oo hor taal. Qaado dhalada nadiifiyaha ah ama diyaari xalalka khamriga: 50 g oo vodka ah 0.5 litir oo biyo ah.
Maro qoy oo si fiican u tuuji. Ku xoq saqafka hoobiye si aad uga saarto calaamadaha xaaqinka oo aad ugu darto iftiin dusha sare ah.
Sida loo nadiifiyo saqafka fidsan ee dharka
Iyadoo ay ugu wacan tahay isugeynta fiilooyinka, saqafka dharka ayaa xoogaa aad u adag in la ilaaliyo, nadiifinta qalalan ayaana ku habboon iyaga. Laakiin haddii saqafka uu aad u wasakhaysan yahay iyo nadiifinta qoyan waa lama huraan, markaa sidoo kale adiga ayaa la samayn karaa.
Sida loo qalajiyo nadiifinta saqafka dharka
burush jilicsan oo jilicsan;
jaranjaro ama miis adag.
Isagoo ku taagan jaranjaro, ku soco maro jilicsan oo ku dul soco saqafka oo dhan, adigoo ka ruxaya boodhka iyada oo leh dhaqdhaqaaqyo gaagaaban, adigoon cadaadisin. Haddii wasakh yar ama shabagyo yaryar ay ka sameeyeen saqafka, ku nadiifi buraash jilicsan.
Sida loo qoyo nadiifinta saqafka dharka
Nadiifiyaha dharka (badanaa waxaa loo iibiyaa sidii aerosol ama dhalada buufinta)
maro microfiber ah ama maro kale oo aan dheecan lahayn;
Akhri tilmaamaha wakiilkaaga nadiifinta: nuucyada way kala duwanaan karaan marka la isticmaalayo. Alaabta ku mari maryaha saqafka leh maraqa ama, haddii aerosol, ku buufi saqafka.
Ku dhaaf dhowr daqiiqo si uu alaabtu u hirgasho. Ka saar buraash jilicsan ama maro qoyan. Aad ha u qoysin saqafka, haddii kale waxay qaadan doontaa waqti dheer in la qalajiyo.
Sida wasakhda looga saaro saqafka fidsan
Haddii saqafka lagu dhejiyo hal ama laba meel oo keliya, markaa ma dhaqi kartid gebi ahaanba, laakiin si fudud uga saar qashinka. Waxaa roon in isla markiiba la dillaaciyo inta ay cusub yihiin.
Sida meesha looga saaro wasaqda dufanka leh
Dhan saabuun saxan ah mari marada microfiber oo si tartiib ah u xoq wasaqda ilaa ay ka milanto. Ka dib alaabta ka saar isbuunyo qoyan oo nadiif ah oo ku tirtir aagga aad ka shaqeysay maro jilicsan oo engegan ama tuwaal warqad ah.
Sida loo nadiifiyo wasakhda dillaacsan
Haddii wasakhda jaalaha ah ay ku haraan saqafka ka dib markii ay daadadku daadiyeen deriska, isku day inaad isticmaasho budada dhaqidda oo leh saameyn caddaan ah. Ku mil qaado qaado oo budo ah litir biyo diirran ah oo maydh wasakhda, dabadeed dusha sare mari isbuunyo lagu rusheeyey biyo nadiif ah.
Hydrogen peroxide ayaa sidoo kale ku caawin karta. Waxaa lagu mariyaa isbuunyo qoyan oo si fiican u maroojisan oo saqafka sare leh ka dibna lagu dhaqay wasakh.
Sidoo kale, dharka PVC, waxaad isticmaali kartaa ammonia xal saabuun ah oo ah 1: 1.
Sida loo saaro wasakhda rinjiga
Si degdeg ah, inta rinji weli cusub yahay, ka saar wasaqda maro engegan. Haddii rinji uu hore u engegay, ku qoyso dhawr dhibcood oo biyo ah ka dib 5-7 daqiiqo isku day inaad tirtirto wasakhda. Haddii aysan ku milmin biyo, isticmaal suufka si aad ugu dhibciso wasakhda ruuxa cad ama dareere kale, ka taxaddar inaadan taaban saqafka laftiisa. Ku masax rinjiga la badhxay suuf kale ama isbuunyo.
Sida loo saaro wasakhda calaamadeeyaha
Calaamadaha khamriga waxaa lagu tirtiraa vodka ama biyo saabuun leh oo lagu daro khamriga. Calaamadaha biyaha ku salaysan waxaa lagu dhaqi karaa biyo caadi ah oo saabuun ah.
Sida loo saaro wasakhda ketchup
Ka tirtir wixii wasakh ah oo cusub isbuunyo qoyan. Ku dhaq raadadka soo haray saabuunta weelka oo ku raaci biyo nadiif ah. Haddii wasakhdu gabowdo, mari dambas soodhaha oo biyo lagu qasi jiray oo ku dhaaf 10 daqiiqo. Ku tirtir maro yar yar.
Maxaa aan la dhaqi karin saqafka fidsan
Sharaca laga sameeyay saqafyada ayaa si fudud u dhaawacma, markaa waa in taxaddar la sameeyaa marka la qabanayo. Ka saar faraantiyada ama xidho galoofyada caagga ah ka hor inta aanad nadiifin. Saqafka fidsan lama nadiifin karo:
acetone, acid iyo dareerayaasha kale ee gardarrada;
Biyo aad u kulul;
abrasives iyo isbuunyo adag.
Waxa la sameeyo si loo dhaqo saqafka fidsan inta ugu yar ee suurtogalka ah
Isticmaal maro yar yar si aad boodhka iyo wasakhda khafiifka ah uga tirtirto saqafka dhawrkii biloodba mar.
Kahor intaadan rakibin saqafka fidsan, hubi xaalada tuubooyinka: wasakhda daadinta way adagtahay in meesha laga saaro.
Way fiicantahay inaadan sigaar ku cabbin qolka, haddii kale saqafka wuxuu isu rogi doonaa huruud.
Hadduu gees ka samaysmay sharooto, ha isticmaalin vacuum cleaner si aad u nadiifisid, laakiin xaaqin calal nadiif ah wadata.
Marka saqafka wasakhaysan yahay, isla markiiba masax inta ay wasakhdu cusub tahay.
Waxaa habboon in lagu sameeyo maro fidsan oo musqusha ah oo keliya haddii aad leedahay dabool wanaagsan, haddii kale waxay noqon kartaa qoyaan iyo wasakh.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida loo nadiifiyo saqafka fidsan si aad ugu ekaato mid cusub!